चाडपर्वका बेला यस्तोमा महिनावारी भए के गर्ने ? चिकित्सकको राय यस्तो छ - Everest Dainik - News from Nepal
चाडपर्वका बेला यस्तोमा महिनावारी भए के गर्ने ? चिकित्सकको राय यस्तो छ
मासिक श्राव भए पूजापाठमा सहभागी नहुने हाम्रो धार्मिक चलन छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
महिनावारी एक नियमित र अत्यन्त प्राकृतिक प्रकृया हो । तर पनि हाम्रो समाजमा महिनावारी भएको अवधिलाई ‘नछुने’ पनि भन्ने गरिन्छ । समान्यतयाः यो बेलामा कुनै पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्था भएको शुभ कार्यमा सहभागी नहुने तथा कसैलाई नछुने र छोएको नचल्ने भएकोले पनि नछुने भनिएको हो ।
यद्दपि महिनावारी हुनु भनेको एउटा सामान्य शारिरीक प्रक्रिया मात्र हो । शारिरीक रुपमा परिपक्कता आए पछि मुख्यतया ईस्ट्रोजेन र प्रोजेष्ट्रोन हर्मोनले गर्दा पाठेघरको भित्रि तहमा आएको परिवर्तन र सो तह टुक्रिएको कारणले महिनावारी हुने गर्छ ।
महिनावारी हुनुका पछाडि हाईपोथालामस्, पिट्युटरी ग्रन्थी, अण्डास्य र पाठेघर सबैको आ-आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ ।
भाइपूजामा महिनावरी भए ?
महिनावारी नियमित रहेका महिलाहरुमा महिनावारी हुने मिति अनुमान गर्न सकिन्छ । चाडवाडको बेलामा महिनावारी हुने भए पछि धेरैलाई तनाव हुने हुनसक्छ । अझ धेरैबर्ष पछि तिहारमा भाई आउनु र महिनावारी नि हुनुले नमज्जा बनाउन सक्छ ।
तर महिनावारीको कारण धेरै चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । यस्ता शुभ शायद वा अवसरमा महिनावारी हुने रहेछ भने पनि सजिलै महिनावारी २-४ दिन पर सार्न सकिन्छ । यस अवस्थामा महिनावरी हुने दिन भन्दा १-२ दिन अगाडि बजारमा उपलब्ध हुने प्रोजेष्ट्रन चक्कि प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रोजेष्ट्रोन ट्याब्लेट ५ मिलिग्रामको बिहान र बेलुका गरी २ पटक कम्तिमा २ दिन अगाडिबाट शुरु गरेको राम्रो हो । यस प्रयोजनका लागि प्रोजेष्ट्रोन चक्की नपाएको अवस्थामा परिवार नियोजनका लागि प्रयोग गरिने खाने चक्कि पिल्स सेवन गर्दा पनि हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस महिनावारीको रगत यस्तो काममा प्रयोग गर्छन् यी महिला
कुनै असर पो गर्छ कि ?
यसरी महिनावारी पर सारेको अवस्थामा स्वास्थ्यमा असर पर्ने त होईन ? धेरैलाई चिन्ता हुने गरेको पाईन्छ । नियमित रहेको प्रकृयालाई अप्राक्रितिक रुपमा पर सार्नुले धेरै र दिर्धकालिन असर गर्दैनन् । तर यस्तो चक्किहरु पटक पटक थोरै अवधि (२-४ दिन) मात्र प्रयोग गर्नाले महिनावारी अनियमित हुने तथा अन्य गडबडि हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता चक्किहरु पटक पटक २-४ दिन मात्र सेवन गर्नु भन्दा पुर्ण अवधि अर्थात २१ दिन नै खानु राम्रो हुन्छ ।
(लेखक मोरङ सहकारी अस्पतालका प्रसुति तथा स्त्रीरोग बिशेषज्ञ हुन्)
ट्याग्स: menstrual health, महिनावारी